ရေဓာတ်ကို အပြည့်အဝဖြည့်တင်းပေးမယ့် Hydo Boost City Shield Facial Gel Mist!! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ရေဓာတ်ကို အပြည့်အဝဖြည့်တင်းပေးမယ့် Hydo Boost City Shield Facial Gel Mist!!
ရေဓာတ်ကို အပြည့်အဝဖြည့်တင်းပေးမယ့် Hydo Boost City Shield Facial Gel Mist!!
အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်နော်။ ဒီနေ့မှာတော့ နေရောင်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်စေ ခြောက်သွေ့ပျက်စီးလာတဲ့ အသားအရေကို ပြန်လည်ကုစားပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက် Hydo Boost City Shield Facial Gel Mist လေးရှိနေပါပြီ။
ဒီ Mist လေးဟာ Lightweight ဖြစ်တဲ့အပြင် Hyaluronic Acid ( ရေဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်း ), Aloe & Moringa seed ( Antioxidant ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ခြင်း ) နဲ့ Botanical Extract ( Kiwi, Moringa seed, Yeast Extract တို့ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဉတုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော အသားအရေ ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း ) တို့ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး ရေဓာတ်ပြည့် လန်းဆန်းတဲ့အသားအရေကို ရရှိစေပါတယ်။ ဒါအပြင် ပတ်ဝန်းကျင်မှ အသားအရေ ကြံ့ခိုင်မှုအားလျော့စေနိုင်မယ့် ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း၊ ချွေးပေါက်များ ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ နေလောင်ခြင်း တို့မှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
အသုံးပြုတဲ့အခါ ၆-၈ လက်မအကွာမှ ဖြန်းပြီး လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ကပ် လိမ်းပြီးမှလည်း ဖြန်းနိုင်သလို မလိမ်းခင်မှာ အောက်ခံအနေနဲ့လည်း ဖြန်းနိုင်ပါတယ်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံစားရတဲ့အခါတိုင်းမှာ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းမှုကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ အသားအရေနဲ့ နေရောင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမျိုးမဖြစ်စေပဲ အလွှာတလွှာအနေနဲ့ ကာကွယ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် 23$ ဖြစ်ပြီး UK- Direct Cosmetic & Boutique တို့မှာ မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Image Source: www.neutrogena.com
အဆီဖုတွေကင်းစေဖို့ Biore နဲ့ သန့်စင်ဖို့မမေ့နဲ့နော်……..
Eucerin Q10 နဲ့ အသားအရေလေးတွေ ထိန်းသိမ်းကြမယ်